SALMAN KHAN: “Haddii aad ku guuldarreysato jaceylka waa nasiib xun tahay” | Filimside.net
Home » Bollywood News » SALMAN KHAN: “Haddii aad ku guuldarreysato jaceylka waa nasiib xun tahay”
Baraha bulshada waxaa qabsaday sawirro shidan oo ay isla galeen Salman Khan iyo Katrina Kaif kuwaasoo majalad loogu talogalay.
Katrina Kaif iyo Salman Khan ayaa shan sanno ka dib shaashadda ku midoobi doona waxaana mideynaya filimkooda Tiger Zinda Hai (#TZH) kaasoo uu leeyahay Director Ali Abbas Zafar lana daawan doono December 22, 2017.
Salman Khan ayaa buurta barafka ah ee Summit dusheeda wuxuu sawirradaas kula soo galay Katrina Kaif, markaasoo wax laga weydiiyey aragtida uu ka aaminsan yahay jaceylka. 51 sanno jirkaan oo marar badan ay kala hareen gabdho ay isjeclaayeen ayaana daaha ka qaaday in aysan guuldarro jaceyl soo marin abid.
Sallu Bhai ayaa laga soo xigtay: “Waxaan u maleynayaa inay dadka oo keliya isticmaalaan sheekada ah inaan jaceylka ku guuldarreystay.
“Anigu waxaan aaminsanahay in haddii uu qofku ku guuldarreysto jaceylka ay taasi muujineyso inuu nasiib daran yahay.”
Isagoo Salman Khan ka jawaabayey su’aasha la xiriirta ku guuldarreysashadiisa jaceylka wuxuu yiri: “Sida loola tacaamulo guuldarrada waa waxa ugu adag balse meesha aan ka yimid, wax walba oo noloshaada kugu dhaca waxaa laga soo qaadaa inay kuu tahay khibrad dheeri ah.
“Maanta ma taagni halkii aan taagnaa dhallinyaronimadeydii, tallaabo walba oo aan qaado horay u socod ayey ka dhigan tahay. Yaraanteydii waxaan dareemi jiray inaan ahay sida shaqsi bartilmaameed ah oo kale. Maantase waxaan ku noolahay xornimo ballaaran.
“Marka aan arko waqti ilaaliyaheyga, marka aan la hadlo taageereyaasheyda oo ay ku qeyliyaan magaceyga. Marka aan subaxdii arko iyadoo gawaarideyda la ii dhaqayo, markaas ayaan eegaa nafsaddeyda isla markaana aan ku raaxeystaa nolosheyda. Sidaas darteed guuldarrada wax umbaan ka bartay”.